Sida Isticmaalka Xogta Inteyer ee Macaamiil ay uga Faa'iideysan karto Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta ee 2019 | Martech Zone
Waxay umuuqataa wax aan caadi aheyn in, marka la gaaro 2019, shirkado badan aysan isticmaaleynin xogta ujeeddada si loo wado iibintooda iyo dadaallada suuqgeynta. Xaqiiqda in dad aad u tiro yar waligood qodeen si qoto dheer si ay u kashifaan tilmaamaha ugu fiican ee suurtogalka ah ayaa adiga iyo shirkaddaada ka dhigeysa faa'iido la go'aansaday.
Maanta, waxaan jeclaan lahayn inaan jaleecno dhowr arrimood oo ku saabsan xogta ujeeddada iyo waxa ay u qaban karto iibka mustaqbalka iyo xeeladaha suuqgeynta. Waxaan baari doonnaa dhammaan waxyaabaha soo socda:
Waa maxay ujeedka xogta iyo sida loo helay
Sidee xogta ujeedadu u shaqeysaa
Isku waafajinta iyo iskaashiga u dhexeeya suuqgeynta iyo iibka
Waa Maxay Intent Data?
Source source: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data
Erayada ugu fudud, ujeedada xogta waxay muujineysaa marka rajo qaas ah ay soo bandhigeyso dabeecadaha qadka tooska ah ee muujinaya ujeedo in la iibsado. Waxay ku muujineysaa laba qaab oo kala duwan: xogta gudaha iyo xogta dibedda.
Laba tusaale oo caadi ah oo ujeeddada gudaha ah ayaa ah
Foomka xiriirka websaydhkaaga: Qofka xiriirka sameynaya wuxuu la xiriirayaa ujeeddo isagoo doonaya inuu wax badan ka ogaado shirkadda, adeegyadeeda, iwm.
Macluumaadka macaamiisha maxalliga ah: Xogta laga soo ururiyey macaamiisha maxalliga ah ee loo maro CRM ama aaladaha kale ee suuqgeynta ayaa aad u qiimo badan markii la isku dayayo in la fahmo ujeeddada. Xogta waxaa isticmaala kooxaha suuq geynta si ay diirada u saaraan hogaamiyaasha ku sii dhowaanaya sameynta go'aanka wax iibsiga.
Macluumaadka ujeedka dibedda waxaa lagu soo ururiyey iyada oo loo marayo bixiyeyaasha dhinac saddexaad waxayna adeegsadaan xog weyn si loo ururiyo macluumaadka ka kooban. Waxaa lagu ururiyaa iyada oo loo marayo cookies-ka la wadaago waxaana lagu daaweeyaa heerka IP. Xogtaan waa wax soo saar malaayiin booqashooyin ah oo ku socda bogag gaar ah oo ku yaal boqollaal kun oo bogag internet ah.
Xogta noocan ah waxay bixisaa macluumaad qaas ah oo kooban oo ku saabsan tiro qiyaas aan dhammaad lahayn. Waa kuwan tusaalooyin yar:
Tirada jeer dukumiinti gaar ah, fayl, ama hanti dijitaal ah ayaa la soo dejistay
Inta jeer ee fiidiyowga la daawaday
Immisa qof ayaa guji ka dib markay akhriyeen wicitaan ficil ah bogga soo degitaanka
Tirakoobka raadinta ereyga
Sidee Intent Data u dhadhamiyaa?
Source source: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/
Xogta intent waxaa isku soo duba riday iibiyeyaasha ka ururiya xogta bogagga internetka B2B iyo kuwa daabaca waxyaabaha ku jira, dhammaantoodna waxay ka tirsan yihiin a wadaaga xogta-wadaagista. Xaqiiqdii, fikradda ah in la ogaado bogagga uu qof gaar ahi booqdo, shuruudaha ay raadinayaan, iyo noocyada ay la macaamilaan waxay u muuqan karaan waxoogaa xumaan ah wejigeeda, laakiin waa wax uun laakiin. Xogta ayaa la uruuriyay oo loo keydiyay ujeedkan, ka dibna lala wadaagayaa (ama loo iibiyay) xirfadlayaasha iibka iyo suuqgeynta. Shirkad nuqul sameynta, tusaale ahaan, waxay dano gaar ah ka qaadan doontaa shirkadaha (ama, xaaladaha qaarkood, shaqsiyaadka) ee gala ereyada raadinta sida "adeegyada qorista maqaalka”Ama” qoraa tacliimeed ”oo ku jira matoorada waaweyn ee raadinta oo waliba booqda boggaga iibiya adeegyadan oo kale iyadoo ujeedadu tahay in la iibsado.
Xogta waa la uruuriyaa oo la soo wariyaa toddobaadle inta badan kiisaska. Isugeynta isu-geynta balaayiin baaritaanno ah, booqashooyinka goobta, soo degsashada, guji-dhex-dhexaadinta, beddelaadyada, iyo waxqabadyada, iibiyeyaashu waxay qeexi karaan isticmaalka nuxurka waxayna cadeyn karaan kororka.
Fiidiyowgaan waxaa ka Bombora taasi waxay si fiican u sharraxaysaa nidaamka:
Sidee Intent Data u shaqeeyaa?
Source source: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/
Malaayiin dad ah oo adduunka ah ayaa adeegsada internetka si ay uga baaraan malaayiin mowduucyo iyo si ula kac ah ku hawlan waxyaabo khaas ah oo internetka ah. Adiga ayaa go'aaminaya faahfaahinta ugu muhiimsan oo aad bilaabi doonto kormeerka hawlgallada gaarka ah ee u dhigma shuruudaha loogu talagalay Suuqku wuxuu bixiyaa dhammaan macnaha guud ee ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn:
Cinwaanno shaqo oo rajo wanaagsan leh
Baaxadda shirkadda iyo goobta ay ku taal
Magacyada iyo URLyada kootooyinka macaamiisha jira
Magacyada iyo URL-yada kootooyinka la beegsaday
Magacyada iyo URL-yada tartamayaasha tooska ah
URL-yada loogu talagalay saamaynta warshadaha iyo dhacdooyinka
Gacan ku haynta bulshada ee saamaynta warshadaha iyo hoggaamiyeyaasha fikirka
Shuruudaha raadinta ee fudud oo isku dhafan oo la xidhiidha alaabada, adeegyada, dhibaatooyinka / dhibcaha xanuunka, iyo natiijooyinka suurtogalka ah / la doonayo
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxaa lagu dhisay algorithms kuwaas oo fiirsada oo xusuusiya ficilada ku habboon (kuwa tilmaamaya kaqeybgal gaar ah oo ka mid ah malaayiin raadinta iyo waxqabadyada dhaca maalin kasta). Xogta la soo ururiyey waxay liis garaysaa faahfaahinta xiriirka oo buuxa oo ay ku jiraan magacyada hore iyo kan dambe, lambarrada taleefannada, cinwaanada emaylka, magacyada shirkadda, cinwaanada rajada, goobaha, warshadaha, iyo cabirka shirkadda. Waxay sidoo kale muujineysaa xog macno leh oo tilmaamaysa ficillada ay qaadeen.
Tusaalooyinka falalka la arkay waxaa ka mid ah raadinta guud, ka qaybgalka goobta tartamada, ka qayb qaadashada saamaynta warshadaha, iyo weydiimaha la xiriira dhacdooyinka waaweyn ee warshadaha. Xogta ayaa sidoo kale jabisa falalka noocyada iyo kiciyaasha. Si kale haddii loo dhigo, waxay muujineysaa oo keliya waxa rajada ama macaamilku sameeyeen, laakiin sababta isaga ama iyadu way sameeyeen.
Xitaa waa suurtagal in la muujiyo xogta tilmaamaysa macaamiisha hadda jirta, koontooyinka bartilmaameedka ah, iyo soo noqnoqoshada dhacdooyinka ujeedka la muujiyey. Waxaas oo dhan waxay u dhigmayaan haysashada liistada dadka dhabta ah ee qaadaya tallaabada dhabta ah si ay wax badan uga bartaan noocyada wax soo saarka iyo adeegyada aad sidoo kale iibiso.
Xogta Intent Sida Qalabaynta iyo Wada Shaqeynta
Suuqgeynta iyo iibintu had iyo jeer waxay lahaayeen nooc xiriir jacayl-nacayb ah. Kooxaha iibku waxay rabaan hogaamiyayaal aqoon dheeraad ah leh oo diyaar u ah inay iibsadaan. Kooxaha suuqgeyntu waxay rabaan inay ogaadaan hogaaminta hore, la macaamil, oo ay kobciyaan ilaa ay ka gaaraan heerkaas diyaarsanaanta.
Waxyaalahan oo dhami waxay sare u qaadaan natiijooyinka iyo ujeedooyinka xogta waxay ka faa'iideystaan ​​iibka iyo suuqgeynta si weyn. Waxay bixisaa qalab wada shaqeyn guud oo si toos ah ugu xira iibka iyo suuqgeynta, kobcinta iskaashiga, tarjumaadda xogta iyo qorsheynta istiraatiijiyado wax ku ool ah dhammaan noocyada xiriirada. Waa kuwan tusaalooyin caan ah oo ah sida xogta ujeedka loo adeegsado iskaashi:
Soo helitaanka iibka firfircoon ee firfircoon
Yaraynta nabarrada iyo kobcinta daacadnimada macaamiisha
Is-dhexgal guul leh oo lala yeesho xisaabaadka bartilmaameedka
Gelinta hore ee aqoonsiga astaanta iyo aasaaska qiimaha
Raadinta isbeddellada ku habboon
Mid kasta oo ka mid ah aagagga kor ku xusan waxay daneynayaan suuq-geynta iyo iibinta labadaba. Ku guuleysiga dhammaantood waxay shirkadda u dhaqaajineysaa horay waxayna u oggolaaneysaa wax soo saar, iskaashi macno leh oo u dhexeeya kooxaha.
Xog Intent: Faa'iidada Tartan
Isticmaalka xogta ujeedka waxay leedahay dhowr faa iidooyin. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa ah awooda ay ku caawineyso iibinta iyo shaqaalaha suuqgeyntu inay bartilmaameedsadaan tiro iibsadeyaal ah hay'ad dhan. Hal shirkad ayaa awood u leh, badiyaaana sameysa, waxay ka koobantahay in kabadan hal suuq bartilmaameed ama shaqsi hal saqaf hoostiisa. Waxa muhiim u ah hal fulin ama hoggaamiye waxay noqon kartaa - oo badanaa waa - ka duwan tahay mid kale.
Xogta xaddidan waxay ka caawisaa suuqleyda inay u qaabeeyaan waxyaabaha qof kasta oo ku lug leh habka iibsiga. Iyada oo boqolaal ururro ah oo adeegsanaya shuruudo isku mid ah raadinta webka, xogta ujeedadu waxay gacan ka geysaneysaa hagidda abuurista waxyaabo si weyn loo bartilmaameedsaday oo lagu dhisayo ololeyaal suuq-geyn adag oo guuleysta.
Si wax ku ool ah u Kabashada Xogta Dheeraadka ah
Lahaanshaha isku xirnaan toos ah oo udhaxeysa ujeedka iibsadaha iyo asalka asalka ah waxay siinaysaa suuqleyda iyo xirfadleyda iibka gees aad u weyn. Si loo kordhiyo ururinta iyo tayada ujeedka xogta waa lagama maarmaan in xogta la soo uruuriyay ay isku xirnaato noocyo kala duwan oo tirakoob ah, juqraafi ah, iyo xog ururin. Xidhiidh la'aantaas la'aanteed, way adagtahay (akhri: kudhowaad wax aan macquul ahayn) in si buuxda loo fahmo dabeecadaha gaarka ah ee laxiriira astaamaha macaamiisha gaarka ah.
Marka fahamka ujeedka qof gaar ah Qofka iibsada ayaa la aasaasay, iibka iyo suuqgaynta labadaba waxay kujiraan boosas kafiican sidii loo abuuri lahaa waxyaabo laxiriira, waxtar leh oo hogaaminaya iyada oo loo marayo talaabo kasta oo ah safarka iibsadaha.
Mid ka mid ah hababka ugu fudud ee looga faa'iideysan karo xogta ujeedka si wax ku ool ah ayaa ah in la horumariyo waxyaabaha ku jira barta, maqaallada websaydhka, iyo qaabab kale oo qoraallo ah oo muujinaya faham cad oo ku saabsan suuqaaga bartilmaameedka ah. Mawduucu waa inuu wax ka qabtaa dhibaatooyinka iyo dhibcaha xanuunka oo ay weheliso tan gaarka ah ee laga helay xogta ujeedka la ururiyey. Sameynta dhamaanba jagooyinkan astaantaada oo ah hay'ad waxayna ku gudbineysaa awood aad ku gaarsiiso waxgarad caqli-gal ah, aaminaad leh, kalsooni leh.
Sidoo kale waxaa si fiican lagugula talinayaa inaad u qaybiso waxyaabaha asalka ah qaab ballaadhinta gaadhista. Tan waxaa ka mid ah sameynta istiraatiijiyad daabacaad iyo daabacaadda dhammaan waxyaabaha la beegsanayo. Marka la soo koobo, horumariyo oo daabaco nuxurka muraayadda himilada oo hubi inay marin ka hesho horteeda dhagaystayaasha loogu talagalay.
Qaadashada Ugu Dambeysa
Qorshaha jiilka hogaamiya ee si wax ku ool ah uga faa'iideysta ugana faa'iideysta xogta ujeeddada waxay siisaa faa'iido la go'aansaday oo ku saabsan iibka ama hindisaha suuqgeynta. Waxay ka dhigeysaa astaantaada mid ka duwan xitaa tartamayaasha waaweyn waxayna kordhisaa khilaafaadka ugu dambeyntii loo aqoonsado hoggaamiye warshadeed.
Samee istiraatiijiyad suuq geyn toos ah, aan xuduud lahayn oo ka tarjumeysa calaamadaha ujeeddooyinka ee ay soo saaraan rajooyinka inta lagu jiro nooc kasta oo waxqabadyada internetka ah (raadinta, booqashooyinka goobta, isdhexgalka tartamada, iwm). Tani kaliya ma caawin doonto abuurista hoggaanno wanaagsan, waxay sidoo kale saameyn togan ku yeelan doontaa khadkaaga hoose. Isku-darka xogta ujeedka ayaa ka caawin doonta ka-dhigista ololayaasha suuq-geynta mustaqbalka mid guuleysta, taas oo u oggolaaneysa kooxdaada iibka inay diirada saaraan xisaabaadka ay u badan tahay inay iibsadaan.
Tags: dhul suuqgeyn